Ka saar Ribbon gudaha AutoCAD 2009? - Gofumed
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala waayeelka ayaan jeclayn qaabaynta qaabka loo yaqaan "Ribbon-style menu" AutoCAD 2009, laakiin looma baahna laad badan. Waxa kaliya dhibaato ah jaahwareer neuronal iyo markii aan ka shaqeeya on a barbaro dadka kale guddiga, qalabka aasaasiga ah in aan ku jireen our qasan isla. Waxaa dhacay Xafiiska 2007 iyo hadda la AutoCAD, Annagu waxaannu nahay raaxo in meesha uu bedeley ku qaadataa waqti in aad isticmaasho amarrada inta badan iyo sida AutoDesk soo celin maayo hab this, waxaad u baahan doontaa in la isticmaalo, waxa uu.
Sida xaqiiqada ah blogs this in English soo qoray badan, iyo AutoCAD 2009 Buugga odhan kun tricks in ay ka faa'iidaystaan ​​design cusub, haddii ay taasi ku, anigu kaa tegi doonaa talooyin qaar ka mid ah si ay u noolaadaan on Ribbon ah, sidii aan u sameeyey ..
0. Helitaanka caadadaada Ribbon
Tani waa kan ugu horreeya, qasab ka hor isbedelka sababtoo ah jiilalka soo socda ayaa u arkaan in sidaasi. buugagan The iman hab this iyo sida ay noogu ku kici inay ka amarrada qoraalka ee AutoCAD flyout R12 guurto, cabitaan this waa in la qaado si degdeg ah ama goor dambe.
Inta badan ee aad heli karto waa in AutoCAD 2011 keenaysaa ikhtiyaarka si interface u eegto sida 2008. Laakiin maahan inaad haysatid rajo badan.
Ma ahan mid xun haddii la dhigo hab dabacsan, oo la mid ah kan maaraynta shaqada fuliyey Microstation ka version V8i. Tani waa inaad siisaa badhanka midigta, dooro ikhtiyaarka "Unlock"Ka dibna u jiid dhinaca bidix.
1. Qari ribbon
Si aad u qariso, uun qor qaynuunka "qoyaan"Laga soo bilaabo aragga. Isla sidoo kale waxaa la siin karaa badhanka saxda ah ee bararka Ribbon iyo dooro "xir". Haddii aad rabto in mar labaad la arko, qor taliska "qoofalan".
Inkasta oo aanay muhiim ahayn in si buuxda loo qariyo, waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarka "yaree"Oo bar ah oo aan waxba galabsan na ma saamayn doonto iyo ugu danbeyn aan u heli kartaa dilis IRLE afraad jecel waxay u baahan tahay.
2. U oggolow baararka qaanuunka.
Haddii aan qarineyno ama yarayno waxaan u baahannahay baararka caadiga ah ee isticmaalka, sababtoo ah waa inaad tagtaa dhinaca bidix ee bidix iyo guji midig.
Kadibna doorashadii AutoCAD waxay dooraneysaa baararka danta ah. Guud ahaan:
Oo diyaarna u ahaaday, oo waxay u eg tahay midkii hore. Si loo shaqeeyo ayaa la yiri.
Si aad uhesho muraayadda menu (feyl, muuqaal, qaab ...) waxay ku qasbanaan doontaa in ay ku wareejiso warqada gaduudka ee geeska.
Waxa kale oo suurtogal ah in la sameeyo qaab-dhismeed, iyadoo la adeegsanayo baararka qaaska ah, sida habka loo isticmaalo 25 badi amarrada la isticmaalo, dhammaan isbeddeladaan waxaa lagu keydin karaa faylka .cui, sababtoo ah waxaad ku duubi kartaa mid ka mid ah gudaha
C: Dukumiintiyada iyo Xogta Barnaamijka Barnaamijka Isticmaalaha AutodeskAutoCAD 2009R17.2enusupportacad.cui
Kadibna isbeddelada waxaa lagu keydin karaa USB ama email si loo isticmaalo muraayadeena mashiinka shisheeye.
Post Previous«Previous dhibaatada 2: Acer Aspire One: Ha isku xiro Skype
Post Next 3D Khariidadda Adduunka, khariidad waxbarashoNext »
16 Jawaab oo ku saabsan "Ka saar Ribbon gudaha AutoCAD 2009?"
haweenka bilicda xNUMX isagu wuxuu leeyahay:
Dingo Autokado 2015 juwanada. Kaip ją susigražinti?
José Miguel isagu wuxuu leeyahay:
Hada, waxaan la jiray AutoCAD sanado badan, laakiin ... waxa ka sii darani waa isbedelka adag ee shaashooyinka soojeedinta.
Waxaan mar hore u qaabeeyey qaderkaygii, midda hore. Hadda, waxaan rabaa inaan u guurto lammaane kale, oo ah PC kale. Waxaan u maleynayaa inay jiri doonto hab lagu kaydiyo faylka oo awood u leh inuu furo autocad kale oo leh qaabka RIBBON cusub.
Ma i siin kartaa xalka?
Iyo hambalyo ku saabsan bogga.
Hello, waxaan kaliya ku rakibay Autocad 2015, mana awoodi karo inaan tirtiro raadkii cursada marka aan u guuro shaashadda. Sideen uga saari karaa?
Maqaalkan RIBBOON ma ogi sida loo soo saaro, waan tirtiraa, laakiin markaan dib u soo galo autocad waxay dib ugu soo noqotaa inaan la yareeyo ma doonayo inaan arko caawinaad dheeraad ah ... mahadsanid hore.
Jean Wolf isagu wuxuu leeyahay:
Wax badan iga caawi, gaar ahaan sababo amar diidmo ah oo xakameynaya liiska ribbada, oo aad ku firfircoon tahay caawimadaada
sidee baan u dhaqaajin karaa meesha amarkayga ee autocad 2011
in 2010 ay suurtogal tahay in la dhigo qaanuunada amar ee jiilaalka si ay u noqoto mid la yiraahdo autocad 2008? Waxaan raacay talaabooyinkaaga oo anigana ma samayn karo! caawimo fadlan
Silverio isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin macluumaadka
Gali guddiga kumbuyuutarka, rakib / barnaamijyada uninstall iyo isku day inaad ka fogaadaan halkaa.
Elena isagu wuxuu leeyahay:
subax wanagsan, dhibaato ayaan qabaa oo waa inaan ka quustay autocad 2009 oo aan tirtiro dhammaan feylasha aan ka helay barnaamijka oo hadda aan doonayo inaan rakibo, ma ii ogolaaneyso inaad ii sheegto inay mar horeba ku rakiban tahay inay socodsiiso waxaanan siiyay «regedit» oo tirtiro dhammaan faylasha laakiin waxba igama caawin fadlan
Waad ku mahadsantahay fiirinta Nasinta.
Horeba isticmaalayaasha ayaa loo isticmaali doonaa isbedelka waxayna ka faa'iideysan doonaan cajaladda.
Wow ... Waxaan arkaa inaadan jecleyn "ribbon" ama caadi ahaan loo yaqaan ribbon.
Waxaan qabaa inay tahay qalab aad u faa'iido badan, oo waxa kaliya arrin qabsaneysa. Dhab ahaantii in 2010 version (Civil 3D) ayaa soo hagaagtay sababtoo ah mar shay ee rayidka ah 3d loo doortay ku habboon in shayga, oo la mid ah qalabka macnaha menu ku cad.
Marka la soo gaabiyo, haddii aanan jeclayn qoraalada cusub sababtoo ah waxay bedelayaan kuwa waayeelka ah, waxaan la yaabanahay ... Maxaan ugu dhejin karnaa? Waa maxay sababta aan uga tagin version of 'AutoCAD 14' oo lagu rakibay? 🙂
G !, magacyada amarrada aad soo sheegtey waa inay faallo ka bixiyaan inay ku ansax yihiin oo keliya noocyada Ingiriisiga, ama si ka sii wanaagsan weli, magacyada amarada oo ingiriisi ah oo leh qoraalka '' _ '' ee ka horeeya amarkani waa mid ansax ah luqad kasta 💡
GatitoMiau isagu wuxuu leeyahay:
Shakhsi ahaan, waxaan la shaqeeyaa labada is dhexyaaca ee AutoCAD 2010. Dhanka kale, waxaan ula bartay midka cusub, dhanka kale waxaan u weeciyaa kii hore markii aanan helin qalab ama aanan soo xusuusinin amarkiisa. Ujeeddo ahaan, waxay iila muuqataa qayb macquul ah oo macquul ah oo ka imaanaysa AutoCAD 2009. Amarada sida “Align” loogu yaqiinay ayaa la yaabay
Thanks for info Federico, inkasta oo ugu fiicani waa in la helo caadada
Todobaadkii hore maxkamadda Versioned rakibi AutoCAD Map 2010, iyo ka hor-upka uu ku siinayaa ikhtiyaarka in ay isticmaalaan interface ah Ribbon ama classic ah, meel wanaagsan kuwa weli diido in la tartami teknoolajiyada cusub.